प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : कोमल ओली पोईमन्त्री, करिश्मा सुन्दरीमन्त्री ! (हेर्नुस भिडियो)
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव : कोमल ओली पोईमन्त्री, करिश्मा सुन्दरीमन्त्री ! (हेर्नुस भिडियो)	By नवीन सन्देश on	९ भाद्र २०७३, बिहीबार १२:५१
काठमाडौँ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको लामो समय बिती सक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गाइजात्राको अवसरमा कलाकार घनश्याम गौतमले ‘प्रचण्ड बन्दै’ यसै बिषयलाई ब्यङ्ग गरेका छन् ।
‘लस्सी टक विथ रश्मि’ कार्यक्रममा उनले कोमल ओली पोईमन्त्री, करिश्मा सुन्दरीमन्त्री, डा केसी अनसन मन्त्री, विप्लब बन्दमंत्री प्रस्ताव गरेका हुन् ।